Injineer Yariisow oo amar kasoo saaray dhismaha dhul dan guud ah oo ka socday Muqdisho – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Injineer Yariisow oo amar kasoo saaray dhismaha dhul dan guud ah oo ka socday Muqdisho
Guddoomiyaha cusub ee maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Injineer C/raxmaan Cumar Cismaan (Yariisow) ayaa markii labaad soo saaray amar lagu joojinayo dhul danta guud ah oo dhismo ku socday.
Amarka Injineer Yariisow ayaa yimid, kadib markii uu warbixin ka dhageystay waaxda dhul bixinta ee gobolka Banaadir, isagoona kadib ku wargeliyay hay’adaha ay quseeyso joojinta howlaha dhismaha dhulkaas.
Injineer Yariisow ayaa tilmaamay inaan marnaba loo dulqaadan doonin in dhismayaal sharci darro ah laga sameeyo dhulalka danta guud.
Dhulkaasi ayaa ku yaalla degmada X/jajab, gaar ahaan kasoo horjeedka dekedda weyn ee magaalada Muqdisho.
Dhinaca kale, Injineer Yariisow ayaa faray maamulka degmada X/Jajab inay gacanta ku hayaan dhulkaan uu dhismuhu ka socday, waxaana hay’adaha ammaanka iyagana lagu wargeliyay inay tallaabo ka qaadaan cid walba oo isku dayda inay dhulkaasi dhisaan.
“Cid waliba oo isku dayda in dhulka danta guud ay dhismayaal sharci darro ah ka sameeyso tallaabo ayaan ka qaadi doonnaa, joojinta dhismaha ka socda dhulka danta guud ee kasoo horjeeda dekedda magaalada Muqdisho waa tallaabo aan uga gol-leennahay in dib loogu soo celiyo gacanta dowladda dhulalka danta ee ka maqan”. Sidaas waxaa yiri Injineer Yariisow.
Ugu dambeyntii, Injineer Yariisow ayaa ciidamada amniga ee gobolka Banaadir amar ku siiyay inay fulliyaan amarka ah joojinta dhismaha dhulkaas oo uu sheegay inay gacanta kusii heyn doonaan maamulka degmada X/Jajab ee magaalada Muqdisho.